मांसाहारी भोजन राम्रो कि शाकाहारी ! - sambahak
Home जीवन शैली मांसाहारी भोजन राम्रो कि शाकाहारी !
काठमाडौं । भनिन्छ शाकाहारी भोजन नै मानव शरीरका लागि उपयुक्त हुन्छ । ‘भेजिटेरियन डाइट’ अर्थात शाकाहारी खानाका फाइदा तपाईं हामीले धेरै सुनेका छौँ । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार ‘भेजिटेरियन डाइट’लाई सबैभन्दा स्वस्थ्यकर डाइट मानिन्छ । यसले कोलेस्ट्रल र ब्लड प्रेसरको स्तरमा कमी ल्याउँछ । यस्तै, यसले हाइपरटेन्सन, मेटाबोलिक डिजिज, मोटोपना, टाइप-२ डाइबिटिज र मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट हामीलाई बचाउन सहयोग पुर्‍याउँछ भनिन्छ । पछिल्लो एक अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने मांसाहारीको तुलनामा शाकाहारी मानिसहरूमा अन्य बिरामीका साथै क्यान्सर हुने खतरा धेरै कम हुन्छ ।
मांसाहारी भोजन राम्रो कि शाकाहारी ? भन्ने विषय विवादमा आइरहने गर्छ । यसबारेमा सबैका आ-आफ्नै तर्क छन् । तर, हामीले व्यक्तिको तर्कसँग होइन अनुसन्धानले पुष्टि गरेका वास्तविक र आधिकारिक कुराको आधार लिन जरुरी छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार पूर्ण शाकाहारी भोजनका कारण भिटामिन बी-१२ लगायतका भिटामिन, मिनरल जस्ता कतिपय पोषक तत्वको कमी हुनसक्छ । केही अनुसन्धानले पूर्ण शाकाहारी व्यक्तिहरूमा डिप्रेसनको सम्भावना बढी हुने दाबी गरेका छन् ।
ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८ हजार व्यक्तिलाई १८ वर्षसम्म हेरिएको थियो । प्रत्येक हजार मानिसहरूमध्ये मुटुको रोग लाग्ने शाकाहारीको संख्या मांसाहारीको भन्दा १० कम थियो । तर, मस्तिष्कघात हुनेमध्ये शाकाहारीको संख्या तीन जनाले बढी थियो । आहार विशेषज्ञहरूका अनुसार शाकाहार वा मांसाहार जे गरे पनि धेरै प्रकारका खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
अध्ययनबाट के पनि पुष्टि भएको छ भने, शाकाहारी भोजनले पाचन प्रक्रियालाई अपडेट राख्ने गर्छ । यसले मस्तिष्कलाई सचेत राख्दै मानिसलाई बुद्धिमान बनाउनसमेत मद्धत गर्छ भन्ने भनाइ छ । शाकाहारीहरूमा प्रोटिन कार्बाेहाइड्रेड र चिल्लो पदार्थका साथ साथ अरू पनि आवश्यक तत्वहरू पाउने गरिन्छ । जसमा भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, अमिनो जस्ता तत्वहरू धेरै पाइन्छ । जसकारण क्यान्सर जस्ता रोगहरूबाट बचाउन मद्धत गर्छ । शाकाहारी भोजनमा पाइने फाइबरसमेत अधिक मात्रामा हुने गर्छ ।
Previous articleनिर्वाचन सर्ने हल्लाले आयोग रुष्ट
Next articleभुत भगाउन थिमीमा एक फिट लामो सियो जिव्रोमा छेडदिएपछि